Warbixin: Dagaalada Somalia waxa ay badiyeen dadka waalan. - Caasimada Online
Home Caafimaad Warbixin: Dagaalada Somalia waxa ay badiyeen dadka waalan.
Warbixin: Dagaalada Somalia waxa ay badiyeen dadka waalan.
Saamaynta dagaalladii sokeeye ee Soomaaliya ay yeesheen waxa ka mid ah kororka dadka qaada xanuunka maskaxda ku dhaca. (Halkan ka dhageyso warbixin ku saabsan xaaladda xanuunka dhimirka ee Muqdisho).
Dhinaca kale, Ku-dhowaad 450 milyan oo qof ayaa qaba cudurrada maskaxda in ka badan saddex meeloodna waxay ku nool yihiin waddammada soo koraya.
Sida ay sheegtay hay’adda caafimaadka adduunka, WHO, siddeed ka mid ah tobankii qof ee kasta dadka ku nool waddammada soo koraya ma helaan wax daaweyn ah haba yaraatee.
Waxaana lagu qiyaasay in kala bar dadka reer Afqanistaan ee da’doodu ka weyn tahay 15 jir ay qabaan xanuunnada maskaxda sida murugo, walbahaar ama xanuun laga qaado dhibaatooyin dadka ku dhaca kaddib.
Waxaa jirta lacag aad u yar si loo maalgeliyo hay’adaha caafimaadka maskaxda ee waddammada dhakhligoodu hooseeyo ama meel dhexaadka yahay, kuwaas oo xanuunnada maskaxdu ay yihiin kuwa ugu dayaca badan jirrooyinka faraha badan ee aan waxba laga qaban.